Home Wararka Maanta KHEYRE ‘oo hor-istaagay’ musharaxnimadii Mukhtaar Sheekh Xuseen
KHEYRE ‘oo hor-istaagay’ musharaxnimadii Mukhtaar Sheekh Xuseen
Mukhtaar Sheekh Xuseen Jimcaale oo ahaa musharax xildhibaan ayaa ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre ku eedeeyey inuu ka hor-istaagay inuu u tartamo kursiga beeshiisa ee HOP#049.
Mustaf Sheekh Cali Dhuxulow ayaa horay ugu fadhiyey kursigaas, waxaana maanta mar kale loo diiwaan geliyey inuu u tartamo.
Mukhtaar ayaa sheegay in Xasan Cali Kheyre uu ka shaqeeyey in kursigaas oo beesha Habarcayno ee Murusade ay ku leedahay golaha shacabka loo xiro Mustaf Dhuxulow oo aan lagula tartamin.
Sidoo kale eedeyntaan waxaa soo galay Nabadoon Xaad oo Xasan Cali Kheyre wakiil uga ah kuraasta beesha ee Galmudug taalla, sida uu sheegay musharaxaan la reebay.
“Waxaan u sheegayaa umadda Soomaaliyeed, beesheyda iyo ra’iisul wasaare Rooble, in ra’iisul wasaarihii hore Xasan Cali Kheyre uu boobayo kuraasta beel-weynta Murusade, isagoo adeegsanaya Adeerkiis Nabadoon Maxamed Xasan Xaad, taas oo keentay in kursiga aan u tartamaayey ee Hop049 loo xiro Mustaf Dhuxulow,” ayuu yiri Mukhtaar Sheekh Xuseen.
Ninkaan oo galabta warbaahinta la hadlay ayaa cadeeyey inuu isaga haray tartanka kurigaas, kadib markii laga hor istaagay tartanka, isagoo sheegay in Nabadoon Xaad iyo Kheyre aysan dooneyn in kursigaas lagula tartamo Mustaf Dhuxulow.
Afar kursi oo kursigaan cabashadu ka timid uu ku jiro ayaa berri lagu dooranayaa magaalada Dhuusamareeb, waxaana musharaxiintii maanta la diiwaan geliyey ka mid ahaa wiil uu dhalay hoggaamiyaha Ahlu-Sunna iyo Mustaf Dhuxulow.